I-omega-3 yintsimbi ye-polyunsaturated fatty acids efana ne-EPA kunye ne-DHA, ebalulekileyo ekuphuculweni okuqhelekileyo kwengqondo kunye nombungu. Nsuku zonke umama ozayo uya kunika malunga ne-2.5 g yezinto ezi zinto kumntwana kwaye sele sele ehlelwa kwixesha elidlulileyo. Le meko iqhutyiswa yinyanga e-2 yokuzala umntwana. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukuba i-omega-3 ihlala isinikwa umzimba womfazi ngexesha lokukhulelwa.
I-Omega-3 yokukhusela kunye nokunyangwa kweengxaki ezinzima
I-Omega-3 ngexesha lokukhulelwa kuyimfuneko:
Ukuthintela ukukhipha isisu kunye nokuzalwa ngaphambi kokuzalwa.
Ukunciphisa ubungozi be-toxicosis kwixesha elizayo.
Ukuthintela ukuqala nokuphuhliswa kwengcinezelo kumfazi okhulelwe.
Ukulungelelanisa ukubunjwa kwe-immunity, ingqondo kunye ne-peripheral system ye-nervous child.
Ukunyuswa kwengcinezelo yegazi.
I-Omega-3 ngexesha lokukhulelwa inikeza imeko enhle yesikhumba, iphucula ibala, iphucula imvakalelo, igcina imeko eqhelekileyo yomzimba.
Imithombo ye-omega-3 yabasetyhini abakhulelweyo
I-dose efunekayo ye-omega-3 xa ukhulelwe ingatholakala ngokutya ukutya okuqulethwe yile mveliso imihla ngemihla. Iiphambili "ababoneleli" be- polyunsaturated fatty acids ziintlanzi kunye neoli yemifuno. Kwakhona, i-omega-3 isebantwini, imbewu, imifuno, kwiziqhamo ezininzi, i-yolk yolanga, inyama, iinkukhu. Iinkokeli phakathi kwamafutha omxholo we-fatty acids zi- rapese kunye ne-soy. Nangona kunjalo, ukuzalisa i-saladi kunye nokulungiselela ezinye izitya, kulungele ukusetyenziswa kweoli ye-flaxse. Intlanzi ayifanelekanga nayiphi na into, kodwa kuphela iindawo zolwandle kunye neentlobo ezinamafutha kuphela. Izona zityebi kakhulu kwi-omega-3: i-mackerel, i-herring, i-salmon. Xa upheka izitya zentlanzi, thintela ukucima. I-tastier eninzi, kwaye ibaluleke kakhulu, inokubaluleka ngakumbi, inentlanzi ebilisiwe okanye ibhaka kwi-oven kwimikhono. Olu hlobo luyakulungiswa kwijusi yalo, ngoko ke ngokugqithiseleyo kulondoloza izinto ezincedo.
Ngokufanelekileyo, ukutya okunokulinganisela kunye nokusetyenziswa okufunekayo kwezilwanyana zasemanzini kwiimeko ezininzi kunokubonelela ngowesifazane okhulelweyo onomdla wemihla ngemihla ye-omega-3. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuphela ukutya okunokulinganisela okwaneleyo, kwaye ke ukuza kuncedisa izidlo ezihlukahlukeneyo zokutya.
Izibonelelo kunye neengozi ze-omega-3 iziyobisi kubafazi abakhulelweyo
Ukungabikho kwe-omega-3 emzimbeni wesifazane okhulelweyo kunokubonisa ukutywa kancinci kwesikhumba, de kube kuvele ukubonakala. Unako ukuzalisa iimpahla ezixabisekileyo ngokuthatha izongezo eziphilayo. Ukwangoku, ezo ziyobisi aziqhelekanga, kwaye ziveliswa phantse zonke iinkampani zonyango. Ngenxa yenani elikhulu labenzi be-omega-3 kwabasetyhini abakhulelweyo, oomama abalindayo banombuzo obani? Ngokuqhelekileyo, abafazi banqunywe i-Omega Vitrum Cardio kunye neAevit, kwakunye ne-vitamin complexes ene-high content ye-fatty acids Iithabhu ezininzi I-Raskaus Omega-3, i-Pregnacare Plus i-Omega-3. Nangona kunjalo, nangona i-BAA ayiyena mveliso yonyango kwaye ayinayo ingqinisiso ngokupheleleyo, ugqirha kuphela unokuncoma i-omega-3 efanelekileyo kunye nesilinganiso sabo sabasetyhini abakhulelweyo.
Kwabo bathetha ukufumana i-polyunsaturated fatty acids, ngokusebenzisa izongezo zokutya, ngaphandle kokufunda ngokucophelela imiyalelo, kuyafuneka ukuba udibane nodokotela. Ukugqithiswa ngokugqithiseleyo ngale nkunkuma yendalo yowesifazane okhulelweyo kuyingozi. Emva koko, ukusetyenziswa kakubi kwe-omega-3 kunokunyusa umngcipheko wokophala kwamanye amaxesha. Musa ukukholelwa ngokungaqhelekanga ukuhlaziywa kunye neengcebiso zabahlobo, kuphela iziphumo zophando lwebhubhoratri zingabonakaliswa ngqo ngokusetyenziswa kwayo.
Ukuba owesifazane okhulelwe ufumana i-polyunsaturated acids kuphela ekudleni, "ukudlula ngaphezulu" akunakwenzeka, ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, umntu akadli iintlanzi imihla ngemihla.
Icala lasekhohlo libuhlungu ngexesha lokukhulelwa
Kutheni umntwana esesisu esiswini?
13 ngeveki yokukhulelwa
Ungadla njani ngexesha lokukhulelwa?
Ukutya ngesisu ngexesha lokukhulelwa kwangaphambili
Ingaba kunokwenzeka ngabafazi abakhulelweyo be-valerian?
Akunakuphi ukugula ngemfuyo ngexesha lokukhulelwa?
RFMC xa ukhulelwa
Iiveki eziyingozi zokukhulelwa
Ngaba kunokwenzeka ukuba abafazi abakhulelweyo bakhule izipikili zabo?
I-ultrasound kwiveki yesi-5 yokukhulelwa
INew Fashion 2014
Udidi lweDokotela u-Aibolit, undiphilise!
Indlela yokuqhafaza iipulale ebusika?
Kutheni uphupha ikhephu?
Ngaba ndingayisebenzisa xa ndikhulelwe?
Ukupheka i-dolma kumaqabunga amagilebhisi?
Indlela yokwenza kakuhle amehlo akho - izibonelo zeesithombe ezingama-42 kuzo zonke izihlandlo
ULeonardo DiCaprio wagubha uNyaka omtsha ngaphandle kukaKelly Rohrbach
Iingqungqwana ekwindla-ebusika 2014-2015
Indlela yokwenza isikhephe esenziwe ngekhadibhodi?
I-Oak bark - iimpawu zonyango kunye nokuchasene
Ijusi eyenziwe kwi-chokeberry emnyama-eyiyo kwaye imbi
Abafazi be-Spring Shoes - Amathempelini aHlatshitshiweyo kunye neeNtlonelo zoShishino
Iingxobo zeenja zokugaya